के विन्डोजमा एन्टिभाइरस आवश्यक छ, वा तपाइँ स्थापना बचत गर्न सक्नुहुन्छ? | मोबाइल फोरम
डेनियल टेरासा | 16/05/2022 18:00 | इन्टरनेट
म्याक समर्थकहरूले सधैं अगाडि राखेका उत्कृष्ट तर्कहरू मध्ये एक यो अपरेटिङ सिस्टम खतराहरूबाट सुरक्षित छ। एक तरिकामा, तिनीहरू सधैं विन्डोज कम्प्युटरहरू चलाउनेहरूलाई अलि तल देख्छन्। र, निस्सन्देह, तिनीहरूसँग त्यसो गर्नुको कारणहरू थिए। यद्यपि, विन्डोज 10 को रिलीज पछि चीजहरू परिवर्तन भएको छ। प्रश्न यो हो: अहिले, के तपाईलाई विन्डोजमा एन्टिभाइरस चाहिन्छ?
यस मुद्दालाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्नु अघि, केहि चीजहरू स्पष्ट गर्न महत्त्वपूर्ण छ। उदाहरण को लागी, यो एक लामो समय को लागी अपरेटिङ सिस्टम को लागी ध्यान दिनु पर्छ विन्डोज धेरै आक्रमणहरूको लक्ष्य थियो, तर उनको लोकप्रियता को लागी उनको कमजोरी भन्दा बढी।
अर्कोतर्फ, यो भन्नु पनि उचित छ कि लामो समयको लागि माइक्रोसफ्टले मापन गरेन। आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूलाई उचित सुरक्षा र सुरक्षा प्रणाली प्रदान गर्न असमर्थ, तिनीहरू बाध्य भए तेस्रो-पक्ष एन्टिभाइरस कार्यक्रमहरूको सहारा लिनुहोस्। भुक्तान गरिएको, स्पष्ट रूपमा। सौभाग्य देखि, परिदृश्य 10 मा Windows 2015 को सुरुवात संग आमूल परिवर्तन भयो।
Ver también: विन्डोज १० बनाम विन्डोज ११: मुख्य भिन्नता
Windows 10 ले धेरै नयाँ सुविधाहरू ल्यायो: सूचना पट्टी, नयाँ स्टार्ट मेनु वा Cortana भ्वाइस सहायक मार्फत खोजी, उदाहरणका लागि। र पनि एक प्रभावकारी एन्टिभाइरस प्रणाली: प्रसिद्ध विन्डोज डिफेन्डर
1 विन्डोज डिफेंडर
1.1 यो कसरी काम गर्दछ
1.2 अपडेटको महत्त्व
1.3 Windows Defender ले हामीलाई पर्याप्त सुरक्षा दिन्छ?
2 अतिरिक्त सुरक्षाको लागि विन्डोजको लागि एन्टिभाइरस
2.1 अवास्ट फ्री एन्टिभाइरस
2.3 पांडा नि: शुल्क एंटीवायरस
विन्डोज डिफेंडर यो एन्टिभाइरस हो जुन Windows 10 (र Windows 11) मा निर्मित हुन्छ, त्यसैले यसलाई डाउनलोड वा स्थापना गर्न आवश्यक छैन। तपाईंले यसलाई कन्फिगर गर्न पनि आवश्यक छैन। यो एक धेरै विवेकी उपकरण हो, किनकि हामीले यसलाई ध्यान दिएनौं, यो त्यहाँ सधैं हाम्रो उपकरणको सुरक्षा छ। सबै Microsoft प्रणालीहरूको लागि प्रभावकारी सुरक्षा बाधा।
यस सुरक्षा अनुप्रयोगको उद्देश्य हो खतरा र भाइरस पत्ता लगाउने। त्यहाँबाट, यसले खतरनाक मानिने तत्वहरूलाई हटाएर र संदिग्ध फाइलहरू र हाम्रो कम्प्युटरको लागि सम्भावित हानिकारक सफ्टवेयरलाई क्वारेन्टाइन गरेर कार्य गर्दछ।
यद्यपि विन्डोज डिफेन्डरले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्दछ, यसको म्यानुअल प्रयोग धेरै सरल छ, तपाईंले केवल यी चरणहरू पालना गर्नुपर्छ:
पहिले, मेनुमा जानुहोस् Windows मा सुरु गर्नुहोस्.
त्यहाँ हामी लेख्छौं "भाइरस र खतरा सुरक्षा" यो विकल्प खोज्न र खोल्न।
विन्डोज एन्टिभाइरस भित्र पहिले नै, हामीसँग अन्य चीजहरू बीचमा परिवर्तनहरू गर्न, सुरक्षा विश्लेषण चलाउने र उपकरण सक्रिय छ कि छैन भनेर प्रमाणित गर्ने सम्भावना छ।
विन्डोज डिफेन्डरका केही व्यावहारिक विकल्पहरू हुन्, उदाहरणका लागि, त्यो आवधिक समीक्षा, हाम्रा उपकरणहरू सधैं सही पत्रिकाको अवस्थामा राख्नको लागि, र त्यो ransomware विरुद्ध संरक्षण, आज अस्तित्वमा रहेको मालवेयरको सबैभन्दा खतरनाक रूपहरू मध्ये एक।
Windows 10 देखि, अपडेटहरू गृह प्रयोगकर्ताहरूका लागि अनिवार्य छन्। यसको मतलब यो हो कि यदि हामीले तिनीहरूलाई पहुँच गर्दैनौं भने, तिनीहरू आफैले स्थापना गर्छन्। यो एक ठूलो फाइदा हो, किनकि हाम्रा उपकरणहरू अद्यावधिक राख्दा धेरै खतराहरू रोकिन्छ। जाहिर छ, यी अपडेटहरूले विन्डोज डिफेन्डरलाई पनि असर गर्छ र यसको प्रभावकारिता सुधार गर्दछ।
Windows Defender ले हामीलाई पर्याप्त सुरक्षा दिन्छ?
यो ठूलो प्रश्न हो: के विन्डोज डिफेन्डर हाम्रो कम्प्युटरलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित गर्न पर्याप्त छ? सिद्धान्त मा, यो एक सामान्य प्रयोगकर्ता को लागी हो पर्याप्त भन्दा बढी। यो एक उपकरण हो जसले हामीलाई इन्टरनेटमा समस्याहरूबाट बच्न आधारभूत सुरक्षा दिन्छ। यो धेरै सरल छ र यो नि: शुल्क प्रस्ताव गरिएको छ यसको अन्य महान गुणहरू हुन्।
यद्यपि, यो सम्भव छ कि धेरै अन्य प्रयोगकर्ताहरूले रुचाउँछन् यो सुरक्षालाई अन्य बाह्य र सशुल्क कार्यक्रमहरूसँग सुदृढ बनाउनुहोस्। यो धेरै र बारम्बार डाउनलोडहरू प्रदर्शन गर्ने, वा विशेष रूपमा संवेदनशील सामग्रीसँग काम गर्ने प्रयोगकर्ताहरूको लागि हुन सक्छ जसलाई सुरक्षाको अतिरिक्त डिग्री चाहिन्छ।
अतिरिक्त सुरक्षाको लागि विन्डोजको लागि एन्टिभाइरस
विन्डोज डिफेन्डर द्वारा प्रदान गरिएको सुरक्षा प्राय जसो केसहरूमा पर्याप्त छ भनेर मान्दै, यो कम सत्य होइन विस्तार भन्नुभयो संरक्षण कहिल्यै दुख्दैन। निस्सन्देह, यदि हामीले अर्को सुरक्षा कार्यक्रम प्रयोग गर्ने निर्णय गर्यौं भने, हामीले सधैं जाँच गर्नुपर्छ कि यसले राम्रोसँग काम गर्छ र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यो भरपर्दो छ। तल सूचीबद्ध प्रस्तावहरू निम्न हुन्:
अवास्ट फ्री एन्टिभाइरस
अवास्ट एन्टिभाइरस (PRNewsPhoto/AVG Technologies NV)
अवास्ट फ्री एन्टिभाइरस हालैका वर्षहरूमा सबैभन्दा राम्रो एन्टिभाइरस विकल्पहरू मध्ये एक हो। यो विश्वभरि लाखौं विन्डोज प्रयोगकर्ताहरू द्वारा प्रयोग गरिन्छ, दुबै यसको नि: शुल्क संस्करण (धेरै पूर्ण) र भुक्तान गरिएको संस्करणमा। यद्यपि, यो जान्न महत्त्वपूर्ण छ कि त्यहाँ एक राम्रोसँग स्थापित शंका छ कि, यसको सुरक्षा नि: शुल्क प्रयोग गर्न को लागी, Avast ले हाम्रो प्रयोगकर्ता डेटा व्यापार गर्दछ र यसलाई ठूला कम्पनीहरु लाई बेच्छ जस्तै। गुगल, माइक्रोसफ्ट वा पेप्सी। यो पनि साँचो हो कि धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यसको बारेमा वास्ता गर्दैनन्।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: avast
अतिरिक्त सुरक्षाको लागि विन्डोजको लागि एन्टिभाइरस: BitDefender
संसारमा सबैभन्दा लोकप्रिय र प्रभावकारी एन्टिभाइरसहरू मध्ये अर्को, इन्टरनेट सुरक्षा पेशेवरहरू बीच उच्च रेटिंगको साथ। को नि: शुल्क संस्करण संग BitDefender हामी फिसिङ वेब पृष्ठहरू ब्लक गर्न वा स्पाइवेयर, भाइरस र ट्रोजनहरूको सबैभन्दा सामान्य खतराहरू पत्ता लगाउन सक्षम हुनेछौं। यस सफ्टवेयरको सकारात्मक बिन्दु यो हो कि यसले धेरै कम प्रणाली स्रोतहरू खपत गर्दछ, जसले यसलाई धेरै रोचक विकल्प बनाउँछ।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: BitDefender
पांडा नि: शुल्क एंटीवायरस
विन्डोजका लागि एन्टिभाइरस अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त गर्नका लागि: पांडा फ्री एन्टिभाइरस
BitDefender को विपरीत, नि: शुल्क एन्टिभाइरस बाट पांडा एन्टिवायरस यसले धेरै स्रोतहरू खपत गर्छ, जसले यसलाई सुरुमा यो सूचीमा अन्य एन्टिभाइरसहरू भन्दा कम आकर्षक बनाउँछ। त्यसको बावजुद, यो भन्न उचित छ कि नवीनतम संस्करणहरूमा अनुप्रयोगको अप्टिमाइजेसन धेरै सुधारिएको छ। Panda ले हाम्रो कम्प्युटरलाई सबै प्रकारका मालवेयर र स्पाइवेयर (यद्यपि ransomware विरुद्ध होइन), र उद्धार USB मार्फत रिकभरी प्रणाली समावेश गर्दछ।
लिंक डाउनलोड गर्नुहोस्: पांडा नि: शुल्क एंटीवायरस
एकचोटि यो सबै जानकारी उजागर भएपछि, के तपाइँलाई Windows मा एन्टिभाइरस चाहिन्छ, वा तपाइँ स्थापना बचत गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले दिन सक्ने सबैभन्दा इमानदार जवाफ त्यो हो विन्डोज डिफेन्डर प्रत्येक प्रकारको प्रयोगकर्ताको आधारमा पर्याप्त (वा होइन) हुनेछ। सामान्य सर्तहरूमा, सुरक्षित प्रोग्रामहरू प्रयोग गर्ने र इन्टरनेटको सामान्य प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको लागि, Windows को यो आधारभूत सामान्य सुरक्षा पर्याप्त हुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मोबाइल फोरम » इन्टरनेट » के विन्डोजमा एन्टिभाइरस आवश्यक छ, वा तपाइँ स्थापना बचत गर्न सक्नुहुन्छ?
Wi-Fi सँग मान्य IP कन्फिगरेसन छैन - समस्या निवारण